Imbeko engama-20 kunye nokudlala 3: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | Iindaba zeGajethi
Ngaphandle kwesilumkiso sifumana iifowuni ezimbini zeHonor. Uphawu lwaseTshayina luhlaziya udidi lwaphakathi kunye neemodeli ezimbini ezintsha, esele zisesikweni. Basishiya ne-Honor 20s kunye ne-Honor Play 3. Kwifowuni yokuqala kwezi zimbini bekusele kukho ukuvuza kule veki iphelileyo. Ngelixa lesibini bekukho amarhe okude.
Kwinqanaba lobuchwephesha ziimodeli ezimbini ezahlukeneyo, kodwa zombini iMbeko yama-20 kunye noMdlalo wokuHlonipha 3 yabelana noyilo kunye nomngxunya kwiscreen. Uyilo esihlala silubona kuluhlu lweefowuni zomenzi waseTshayina kwaye efumana ukuthandwa phakathi kuluhlu oluphakathi.
Kwakhona, Iifowuni ezimbini zifika zineekhamera ezintathu zangasemva, Elinye inqaku esilibonayo ngokunyuka okwenzeka rhoqo kuluhlu oluphakathi lwangoku kwi-Android. Ziboniswa njengeefowuni ezimbini ezilungileyo kweli candelo lentengiso. Siza kukuxelela ngakumbi ngezantsi, ngokukodwa.
IHarmony OS, iHuawei yazisa ngokusesikweni inkqubo yayo yokusebenza
1 Ukucaciswa kwe-Honor 20s
2 Ukubalula Hlonipha Dlala 3
Ukucaciswa kwe-Honor 20s
Le Honor 20s luguqulelo olunqamlezileyo lwesiphelo esiphakamileyo sembeko 20, ethi kraca yazisa le ntwasahlobo. Uyilo olufanayo, ukongeza ekubeni nezinto ezifanayo, kuphela izinto ezithile zenziwe lula, ukuze le modeli ilingane neli candelo lentengiso kwaye inokumiliselwa ngexabiso eliphantsi kwintengiso. Oku kukucaciswa kwayo okusemthethweni:
Ukucaciswa kwezobugcisa i-Honor 20s
Inkqubo yokusebenza I-Android 9.0 Pie ene-EMUI
Isikrini I-LCD engama-6.26 intshi ene-HD epheleleyo + isisombululo sama-2340 x 1080
Inkqubo Kirin 810
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128GB (ayinakwandiswa nge-microSD)
Ikhamera esemva I-MP ye-48 enokuvula f / 1.8 + 8 MP nge-f / 2.4 + 2 MP nge-f / 2.4 kunye ne-LED Flash
Ikhamera yangaphambili 32 MP
Conectividad I-Wi-Fi 802.11 b / g / n -I-Bluetooth 5.0-GPS / i-AGPS / i-GLONASS-I-SIM ezimbini-i-USB C -
Ezinye izinto Icala lokufunda ngeminwe NFC
Ibhetri I-3.750 mAh ene-25 W yokutshaja ngokukhawuleza
Ubukhulu X x 154.2 73.9 7.8 mm
Inikwe njengenketho elungileyo kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu. Iprosesa elungileyo, eyona nto iluphawu lwenqaku kweli candelo, ibhetri enamandla kunye neempawu ezintle. Iikhamera zithobela ngokupheleleyo, ziyindibaniselwano eyaziwayo kweli candelo lentengiso. I-Honor 20s isebenzisa i-sensor yeminwe, ebekwe kwelinye lamacala ayo, indawo engaqhelekanga, nangona uphawu luyisebenzisa kwiifowuni zalo ezininzi.
Ukubalula Hlonipha Dlala 3
IHlonipho Dlala i-3 yenye yemodeli phakathi kuluhlu oluphakathi lwegama laseTshayina. Inemiba emininzi efanayo ne-Honor 20s, iikhamera zayo ziyafana ngokomzekelo, nangona iyimodeli elula ngakumbi. Sebenzisa iprosesa ethozamileyo kwaye ngokubanzi kulula. Kodwa ishiya ineemvakalelo ezilungileyo kule meko, nangona ukungabikho kweenzwa zeminwe kwifowuni kuyamangalisa, nto leyo ingaqhelekanga kweli candelo lentengiso.
Ukucaciswa kwezobugcisa Hlonipha umdlalo 3
Umzekelo Dlala i-3
Isikrini I-6.39-intshi ye-LCD ene-HD + Resolution ye-1560 x 720 pixels
Inkqubo Kirin 710
Ukugcinwa kwangaphakathi I-64/128 GB (iyandiswa ngekhadi le-MicroSD)
Ikhamera yangaphambili 8 MP
Inikwe njengoluhlu oluphakathi oluhambelana, kunye neekhamera zabo njengezona zinto zinomdla omkhulu ukulungiselela abathengi. Iikhamera zangasemva ziyafana nezo-Honor 20s, ngaphandle kotshintsho malunga noku, kodwa umphambili wahlukile kwiimodeli ezimbini. Le Honor Play 3 isebenzisa iprosesa yaseKirin 710, eyiprosesa eqale i-premium mid-range kuhlobo lwaseTshayina, nangona ilahlekile emhlabeni ngenxa yeKirin 810 kule meko.
Ukungabikho kwe-sensor yeminwe yinto etsala umdla. Kuqhelekile kwiimodeli ezinesiphelo esisezantsi zokungazisebenzisi, kodwa kunqabile ukuba kuluhlu oluphakathi lwanamhlanje lwe-Android kukho ifowuni ngaphandle kwenzwa yeminwe. IHlonipho Dlala 3 isebenzisa ukubonwa kobuso, njengendlela yokuvula yefowuni.
Iifowuni ezimbini sele zithengisiwe e-China ngokusemthethweni. Nangona okwangoku asazi nto malunga nokwaziswa kwamazwe aphesheya kwayo nayiphi na. Ke kuyakufuneka silinde inkampani ukuba isinike enye idatha malunga noku, eya kuthi kungekudala ibekho. Into eqhelekileyo iya kuba kukuba baziswe eSpain.
I-Honor Play i-3 isungula kwiinguqulelo ezahlukeneyo e-China. Imodeli ye-4/64 GB inexabiso nge-999 yuan (i-125 euros yokutshintsha), ngelixa iinguqulelo ezine-4/128 kunye ne-6/64 GB zisungulwa ngexabiso le-1299 yuan, malunga ne-euro ezingama-165 zokutshintsha.
I-Honor 20s isungula kwiinguqulelo ezimbini. Inguqulelo ene-6/128 GB inexabiso nge-1899 yuan (malunga ne-250 euro ukuyitshintsha). Ngelixa imodeli ene-8/128 GB ixabisa i-2199 yuan (i-290 euro ukuyitshintsha).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Hlonipha ama-20s kunye neNhlonipho Dlala i-3: Uluhlu oluphakathi lwebhrendi
IAmazon iveza iAmazon's Fire TV Stick 4k eSpain